ဟာသ – Shwe Naung
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် ထမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ပါ … ရုံးပေါင်းစုံရှိတဲ့ ဝင်းကြီးထဲထမင်းဆိုင် စ.ဖွင့်တော့ လူသိပ်မကျဘူးရယ်။မဒမ်က တော့်ဟာ ဟုတ်ပမလားမေးတော့မပိုင်ရင်ခြင်တောင်မရိုက်ဘူးကွ ပေါ့ခပ်တည်တည်ပြန်ငေါက်သေးတာရယ်။ ခြင်ထောင်ပြဲမှာစိုးတာလဲပါတာကိုး 😁😁လ.အနည်းငယ်ကြတော့မဒမ်ရဲ့လက်ရာကြောင့်စ.ပြီးလူစည်လာရော…။ဝန်ထမ်းအများစုလာစားကြတဲ့ဆိုင်ဆိုတော့သူတို့ စားပုံသောက်ပုံတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ သိလာတယ်။ ဘယ်သူက ဘယ်လိုစားတယ်ဘယ်သူကတော့ ဘယ်လိုဆွဲတယ် ပေါ့…သိလာရော….ခင်ဗျားတို့ သဘောပေါက်နားလည်အောင်ပြောပြရရင် …ဒီလို…. ………. စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့တွေကလူကြီးပိုင်းပဲစားတာများတယ်။အငယ်တွေက သိပ်မစားရရှာဘူး။လူကြီးပိုင်းပဲစားတော့ရှယ်တွေရောင်းရတာပေါ့ ။တစ်ခါပြင်ကိုစိတ်မဝင်စားဘူး။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုတာလူကြီးတွေပဲ စားတယ်ဆိုတာ သိလာရတယ်။😁 နောက်
“ဟယ်လို… ယောက်ျားလား”😂😂 “ဟုတ်ပါတယ် ဒကာမကြီး”😂😂 “အမ်… ခုပြောနေတာ ယောက်ျားလားလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းကလား”😁😁 “ဟုတ်တယ် ဒကာမကြီး … ဒုလ္လဘ ဆယ်ရက်ဝတ်နေရင်း ဝိပဿနာ အလုပ်တွေလုပ်ရအောင် ကျောင်းရောက်နေတယ်”😂😂😁 (ဒုက္ခပါပဲ… ပက်ပက်စက်စက် ဆိုမလို့ဟာကို ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့မှ လာတိုးရတယ်လို့)😠😠😖 “ဘာဖြစ်လို့လည်း ဒကာမကြီး”😁😁 “ဟိုလေ… ဘာလို့ပြုလို့ အိမ်မပြန်ခဲ့တာလည်း သိချင်လို့ပါ”😠😠 “ဒီလိုရှိပါတယ်
ဆရာဝန် တစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့အတွက် မဖြစ်မနေသိထား သိတဲ့ အချက်ကလေးတွေ
ရင်ခွဲရုံတွင် ဆရာဝန်လောင်းတွေကို လက်တွေ့ သင်ကြားပေးနေသော ဆရာက “တပည့်တို့ ဆရာဝန်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ် ချင်ရင် မရွံတတ်ရဘူး” ထိုသို့ပြောပြီး ဆရာဖြစ်သူမှအလောင်း၏ဖင်ထဲ လက်ချောင်းထိုးထည့်လိုက်ပြီး ပြန်ထုတ်ကာ ပါး စပ်ထဲ ထည့်စုပ်လိုက်သည်။ ထို့နောက် ကျောင်းသားများအား လိုက်လုပ်ခိုင်းရာ…… ကျောင်းသားအားလုံး ရွံရွံနဲ့ အလောင်းကောင် ဖင်ထဲ လက်ချောင်းစွပ်ကနဲထိုးလိုက် ပြွတ်ကနဲစုပ်လိုက် အန်လိုက်နဲ့
လက်ထပ်ပြီး တာမြ ကာသေးသော လင်မယား၂ ယောက် အိမ်ရှေ့မှာ အေးအေး လူလုထိုင်စ ကားပြောနေတုန်း ခြံရှေ့မှာအ ဘိုးကြီး တယောက် လာရပ်ကာ သမီး ဘကြီးဆီခဏလောက်ကွယ် မိန်းမဖြစ်သူ က ဘကြီးအိမ် လိပ်စာမေးချင်လို့ ထင်ပါရဲ့ဟု ထိုင်ရာကထ သွားတော့ အဘိုးကြီးက ဒီလိုပါသမီးရယ် “ဘကြီးပြောတာ ဘယ်သူ့မှပြန်မပြောပါနဲ့ ” အဘိုးကြီးက
မနက်က အလုပ်သွားမယ်ဆိုပြီး လမ်းထိပ့်က ကားဂိတ်မှာ ကားဆောင့်နေတုန်း လူတယောက် ကြည့်နေတာ တွေ့လိုက်တယ်။ သူ့ပုံဆန်ကတော့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ကြည့်လို့တော့ကောင်းတယ် ယောကျာ်းချင်းတောင် ငေးယူရတယ်…။ ကျွန်တော် ပြုံးပြတော့ ပြန်ပြုံးပြတယ် အမယ် ဒီလူ မဆိုးဘူးဟ လူမှုရေးတော့ရှိသားပဲပေါ့ ကိုယ့်ပါသာ တွေးနေမိတယ် ။ ကျွန်တော် ကြည့်လိုက်တိုင်း သူက ပြန်ပြန်ကြည့်နေတယ် ဥပဓိရုပ်ကောင်းတဲ့ သူပေါ့ခန့်လဲခန့်
ဒီနေ့ …နေပြည်တော်ဘ က်ကိစ္စလေးတခု ရှိလို့ဆိုင်က ယ်လေးနဲ့သွားတာ အဲဒီကပြန်လာတော့ ကြာပွင့်အဝိုင်းနားလဲ ရောက်ရော ကိုကိုမော်တော်ပီကယ်ကတား ပါလေရောလား လို င်စင်ပြပါတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပေါ့..ရော့အင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးတော့ သေသေချာချာကိုကြည့်တယ် လိုင်စင်ထဲက ကိုယ့်ပုံကပဲ သိပ်ချောလွန်းနေလို့လား မသိဘူး ပြီးတော့ခင်ဗျား လိုင်စင်ကသက်တမ်းလွန်နေပြီတဲ့ အဲ့တော့ဖမ်းတယ်တဲ့ဟင် အဲ့ဒါများဗျာ စောစောထဲက ပြောရောပေါ့ လိုင်စင်ထဲကဓါတ်ပုံကို သေသေချာချာစိုက်ကြည့်နေသေးတယ်လို့ပြောတော့ဒါကျနော်တို့အလုပ်ပါ မနှောင့်ယှက်ပါနဲ့
ကောင်မေ လးကလည်း အကြိမ်ကြိ မ်ငြင်းဆိုေ နတာပေါ့ !”ဦးရယ် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ခုမီးက…ခလေး ရှိသေးတယ်”ဘောစိ ဦးေ လးကြီးလည်း” မီးကိုသာရမယ်ဆို ဘယ်ပုဒ်မေ တွမဆို ငွေနဲ့ဖြေရှ င်းမည်ဖြစ်ကြောင်း … နွားအို မြက်နုကြို က်တာ အစဉ်အ လာဖြစ်ကြောင်း” ပြောဆိုကာ ဒူးထော က်၍ လက်ထပ်ခွင့်တော င်းနေပြန်တယ် ကောင်မလေး
တက ယ်တော့ … ဗျတ်ဝိ ဗျတ္တ က ဘာ “ဗျတ်” မျိုးနွယ်စု မှ မဟုတ်ဘူး … မဲမဲသဲသဲ နဲ့ ကလွတ်တား ကပ္ပလီ မျိုးနွယ်တွေပေါ့ …။သငေ်္ဘာပျက်ပြီး သထုံမှာ သောင်လာတင်နေတာ …။ ပြီးတော့ …ညီအ ကို လည်း မဟု တ်လောက်ဘူး …။ကပ္ပလီ
လူချစ်လူခင်များအောင် comment ရေးနည်းများ လူဖြစ်ပြီကွ ဟု တင်ထားသော ပို့စ်များအောက်တွင် “ဘယ်သူနဲ့ရတာလဲ ” ဟု မန့်ပါ ကလေးပုံတင်ပြီး My Son ဟု caption ထိုးထားသော ပို့စ်များ အောက်တွင် “Are you sure..?” ဟု မန့်ပါ Married to _____ ဟူသော
ဦး ဆိုရင် ကြောက်နေရ သည် …. ဖုန်းဝင် လာလို့ ကောက်ကိုင်လိုက်တာ ဖေ့ဘုတ် ပေါ်မှာ မနေ့ကမှ ချစ်သူဖြစ်သွားတဲ့ ခေးလေးရဲ့ ဖုန်းဖြစ်နေတော့ ကျုပ် ပျော် သွားတယ်။ “ဦး” “ပြော ခလိန်း” “ဦး ပျော်လို့ရပြီ သိလား” ချိန်းတွေ့တော့မယ် ထင် တယ်လို့ တွေးမိပြီး ကျုပ်